जहाँ Celebrate गर्न चिनियाँ नयाँ वर्ष मा युरोप | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > जहाँ Celebrate गर्न चिनियाँ नयाँ वर्ष मा युरोप
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 08/01/2021)
ड्रेगन नाच, unicorns, र उडान सुँगुरहरु. हो, सुँगुर! को सुँगुर को वर्ष मनाउन, चिनियाँ नयाँ वर्ष युरोप मा मनाउन!
चिनियाँ नयाँ वर्ष, पनि जानिन्छ वसन्त तिहार वा लुनार नयाँ वर्षको, चिनियाँ पात्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हो. यो एक विशेष अवसर द्वारा चिन्ह लगाइएको गर्नुपर्छ परिवार जमघट, खाना संस्कार, मन्दिर मा भेटी, र - पाठ्यक्रम - आतिशबाजी. त्यहाँ युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन विशेष कुरा. यो एक प्राचीन चिनियाँ परम्परा सहभागी एक अद्वितीय मौका छ, फिर्ता डेटिङ 4000 वर्ष. तपाईं मौका जब यो बाहिर सम्झना छैन!
No.1 for Celebrate Chinese New Year यूरोपमा | मैड्रिड, स्पेन
बस्ने चिनियाँ संख्या स्पेन हाल को वर्ष मा एकदम हुर्किसकेका छ, र यो वृद्धि देश मा चिनियाँ नयाँ वर्ष उत्सव को स्तर द्वारा प्रतिबिम्बित गरिएको छ. मा 2019, केही फरक आशा.
तेस्रो वर्ष चलिरहेको लागि, स्पेनको राजधानी स्पेन मा युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन स्थान हो, चिनियाँ दूतावास द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक र उत्सव कार्यक्रम संग. संगीत, कार्यशालाओं, सडक parades, र मासु मार्गहरू मैड्रिड गरेको टाउन को घर - सबै Usera जिल्ला आयोजित पर्वहरू भाग हुनेछ.
पेरिस हुँदा विचार पहिलो शहर छैन एक स्थान बारे सोच युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन. तर यो जादुई रोमान्टिक शहर पर्वहरू समयमा चिनियाँ उत्सव को शहर मा उत्तेजित गर्दछ.
पेरिस बस बारेमा flashy parades छैन र विस्तृत सजावट हुनत. यो समय आफ्नो सर्वोत्तम राखिएको गोप्य को 13 औं जिल्ला स्थित दुई बौद्ध मन्दिर छ. यहाँबाट परिवारहरू चीन, भियतनाम, र कम्बोडिया आफ्नो अभिवादन तिर्न आउन र मा स्वागत नयाँ वर्ष. चिनियाँ कला र शिल्प को प्रदर्शन आनन्द, पकाउँदै, र परम्परागत नृत्य र संगीत. रोशनी शहर साँच्चै यसको नाम वर्ष को यो समय सम्म बाँच्न हेर्नुहोस्. र सबै भन्दा राम्रो कुरा तपाईं एम्स्टर्डम गर्न पेरिस बाट रेल यात्रा र दुवै शहर मा मनाउन!
रमाइलो: एम्स्टर्डम गरेको बदनाम लाल-लाइट जिल्ला एक वास्तविक बौद्ध मन्दिर घर छ. प्रत्येक बर्ष, तपाईं एम्स्टर्डम मा र आसपास युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउनु गर्न सक्नुहुन्छ Fo Guang शान उहाँले भयो एक विशेष कार्यक्रम संग.
शहर यो भाग पनि ठूलो तपाईं प्रामाणिक चिनियाँ खाना लागि एक तरस छ भने छ. आफैलाई प्रसिद्ध हेर्नुहोस महल मा खानाको लो (युरोप पहिलो अस्थायी चिनियाँ रेस्टुरेन्ट) वा Geldersekade मा धेरै चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा एक मा.
पछिल्लो मनाउनु चिनियाँ नयाँ युरोप मा साल | इङ्गल्याण्ड
लन्डन इङ्गल्याण्ड यो युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन संसारको सबैभन्दा ठूलो तरिका धारण कि घमण्ड गर्व लाग्छ, एशिया को बाहिर. त्यसैले, को पाठ्यक्रम, यो एक हिट गर्न को लागी एक छ जब तपाईं युरोप मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन.
यो शहर एक दिन धारण तिहार संग परम्परागत खाना सहित गतिविधिहरु पैक, वार्षिक परेड, प्रदर्शन, र परम्परागत शिल्प. (तपाईं परम्परागत खाना हामीलाई थियो!) हामीलाई गणना!
इ England्ल्याण्डमा तीन मुख्य क्षेत्रहरू छन् जुन यी उत्सवहरू समात्दछन्; ट्राफलगर स्क्वायर, चिनटाउन, र शाफ्ट्सबरी एवेन्यू. प्रत्येक अद्वितीय विशिष्ट गतिविधिहरु र घटनाहरू तिनीहरूले प्रदान; आगंतुकों गर्न जो एक कठिन समय छनौट हुनेछ.
टाउन परम्परागत खाना को मामला मा सबै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो प्रदान गर्दछ. पक्का धेरै मध्ये एक मा एक तालिका सुरक्षित प्रारम्भिक बुक बनाउन शानदार रेस्टुरेन्ट. टाउन भाग्यशाली रातो लालटेन र ब्यानरहरू संग सजावट को सबै भन्दा शानदार बाहिर decked हुन्छ. चिनियाँ नृत्य समूह र प्रदर्शन गर्ने भर धेरै चरणमा सेट पाउन सकिन्छ अप. लन्डन एक नव आगन्तुक हुन सक्छ चिनियाँ नयाँ वर्ष दृश्य तर हरेक वर्ष बडा र राम्रो बन्ने छ र हामी जे हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन 2019!
युरोपमा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन र यी शहरहरू मध्ये कुनै एकमा पुग्नको लागि उत्तम तरिका के हो? रेल बाट, को पाठ्यक्रम! प्रयोग SaveATrain मिनेटमा उत्तम सम्झौता बुक गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-chinese-new-year-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#chinesenewyear #yearofthebpig europetravel longtrainjourneys रेल यात्रा रेल यात्रा ट्राभेलमस्टरडम travelfrance